Maalinta Akhriska iyo Qoraalka Adduunka oo Puntland laga Xusay – Radio Daljir
Maalinta Akhriska iyo Qoraalka Adduunka oo Puntland laga Xusay
Seteembar 8, 2015 8:41 b 0
Talaado, September 08, 2015 (Daljir) — Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa Maanta xustay maalinta Akhriska iyo Qoraalka adduunka,munaasabad lagu qabtay xarunta Jaamacadda Psu ee Garowe ayaa lagu xusay,iyagoo ay ka qayb galeen Masuuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada, Masuuliyiin kale,Ha’yaddo iyo dadweyne kale.
Agaasimaha waaxada waxbarashada dad badan ee wasaaradda waxbarashada Puntland Marwo Safiyo Sugule Maxamuud ayaa faah faahin ka bixisay Akhriska iyo Qoraal isagoo barnaamikan uu hoostago Waxbarashada dad ban,in Puntland uu akhriska iyo qoraalka uu ka bilowday 1998 xiligaas oo la asaasay Puntland.
Waxay tilmaamatay in Ha,yadda Diakonia ay bilowday olole Garowe xilgaas waxayna soo ogaadeen inay soo heleen tiro badan oo ay kamid ahay guri ay ku noolayaan 8 qof inay lix qof waxna akhrin waxna qorin.
Iyadoo sheegtay in markaa kadib la bilaabay in la hortago akhriska iyo Qoraal la’aanta.
Wasiir ku xigeenka Haweenka iyo Arimaha bulshada Marwo Farxiyo Xisri Nuur oo munaasabada fudhay ayaa sheegtay in hadii uusan qof waxna qorin waxna khrin ay noloshiisu wax weyn ay ka dhiman tahay, iyadoo tilmaamtay in ka dowladd ahaan ay tir tiri doonaan qofaan waxna khrin waxna qorin islamarkaana ay da daal uga li doonaan sidii dadka looga saari lahaa Jahliga.
Maxamed Xaashi oo kasocday Ha’yadda Unisco ayaa sheegay in baaritaan lasameeyey la ogaaday in dadka aan waxna qorin akhrina ay gaarayaan 757 milyan oo dadka waaweyna 124 milyan ay yihiin kuwa aan awood u helin waxbarashada.
Dowladda Denmark oo Horjoogsatay Qaxooti Suuriyaan ah oo ku Socday Swedan